‘ उम्मेदवारसँग पैसा असुल्ने भन्दा पनि समर्थन र सदस्यको आधार बनाउने छु’ — News of The World
आज : २०७५ आषाढ ३२ गते
डा केसीका मागप्रति गम्भीर हुन सभापति देउवाको आग्रह
कांग्रेसको विरोधका कारण संसद् अबरुद्ध
Time card system to be put in place for goods-carrier vehicles from July 17
Five Bajura-based journalists including RSS correspondent feted
CPN (MC) demands to save Dr KC’s life
अब देवघाटमा विद्युतीय शव दाहस्थल निर्माण गरिने
बेपत्ता भएकी युवतीको हत्या गरिएको अवस्थामा शब फेला
‘ उम्मेदवारसँग पैसा असुल्ने भन्दा पनि समर्थन र सदस्यको आधार बनाउने छु’
संसार न्यूज संवाददाताआश्विन २७, २०७४
मिन बहादुर जी.सी
उम्मेदवार, युरोप क्षेत्रिय उपसंयोजक
एनआरएनए युरोपको क्षेत्रिय उपसंयोजकमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नु भएको छ कुन–कुन ऐजेण्डा लिएर चुनावमा जाँदै हुुनुहुन्छ ?
लगानी जुटाउने कुरो मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । विधान अनुसार संयोजक र उपसंयोजकमा अधिकार सिमित भएपनि सबै नेपालीको एकतालाई प्रयास गराएर नेपालको आर्थिक रुपान्तरणमा हसै पु¥याउने तथा नयाँ पुस्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्नेमा ध्यान पु¥याउनेछु । प्रविधि, अनुसन्धान र पुँजीको पर्याप्त ठानीने युरोपका नेपालीको मात्र होइन विदेशीको समेत लगानी जुटाउन प्रयास गर्नेछु । दूतावास, एनआरएनए, उद्योग वाणिज्य संघ र युरोपियनसँग अन्तरक्रिया गर्दै नेपालमा लगानीका संभावना र आधार निर्माण गर्न सक्रिय हुनेछ । सूचना र शिक्षाको अभावमा पिल्सिएका तथा असजिलोमा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने विशेष रुपले सक्रिय हुनेछु । गैरआवासीय अभियानमा नयाँपुस्ताको सक्रियता र सहभागिताको वातावरण बनाउन लाग्नेछु ।
यहाँको जित्ने आधारहरु के–के छन ?
भेलाको समयदेखि यहि अभियानमा लागिरहेको छु । अभियानका धेरै साथीहरुले मेरो सक्रियता देख्नु भएको छ र प्रतिवद्धता बुझ्नु भएको छ । युरोपमा नेपालीका समस्यादेखि संभावना सम्म मैले जानेको छु र प्राय देश पुगेको पनि छु । मेरो इमान्दारीता, प्रतिबद्धता र कर्तव्य निष्ठाप्रति धेरै साथीहरुले विश्वास गर्नुहुन्छ ।
यहाँको विचारमा अबको एनआरएनए कस्तो बनाउनु पर्ला ?
युरोपेली क्षेत्रीय समितिको शसक्तिकरण मेरो मुख्य कार्ययोजना हुनेछ । उपसंयोजक, कोषाध्यक्ष र सचिवको व्यवस्था गरेर २९ देशका लागि कार्य जिम्मेवारी बाँडफाड गराउन प्रयास गर्नेछ । आर्थिक समस्यालाई मध्येनजर गर्दै पदाधिकारीहरुको अवसर र जिम्मेवारीमा ध्यान पु¥याउनेछु । लेविलाई चुस्त र नियमित बनाई समस्या हल गर्ने प्रस्ताव राख्नेछु । उम्मेदवारबाट पैसा असुल्ने प्रक्रिया भन्दा बढी समर्थन र सदस्यको आधार बनाउने प्रस्ताव मेरो हुनेछ भने धेरै सदस्यता र नियमित लेविमा जोड हुनेछ ।